Esilucwecwana kunye lug Uhlobo BV
Esisangqa Butterfly Valve
Ivelufa yebhabhathane ebusy
Itywina valve esangweni
Iivalve ze HAVC
Like Valve (Tianjin) Co., Ltd kuveza e Tianjin - kwezoqoqosho sezona ziquququ kumantla China. Like vana inkampani lemveliso a isiphelo eliphezulu-iimveliso vana eye uphando uyilo nophuhliso, imveliso, iinkonzo ukuthengiswa kwelinye. Thina iziko Independent R & D, ubuchwepheshe woveliso oluqhubele phambili kunye nokuphumeza ngokungqongqo imigangatho efanelekileyo yamazwe ngamazwe. Ekubeni iindlela eziphambili yoyilo lobunjineli, izixhobo lemveliso aphuhliswe kakuhle, izibonelelo yokuqinisekisa uvavanyo kunye ingqiqo kwemveliso wayama ngayo, siya "Kanye Valve" ukuqinisekisa ukuba ilungu ngalinye kwimveliso zonke Supply na umgangatho ophezulu kunye nokusebenza.
Uqinisekiso lomgangatho livela ulawulo zonke iinkcukacha. Ukususela zawo, inkampani iye yamkela uyilo-ancedwa ikhompyutha, ezifana CAD kunye nemisebenzi ePhathekayo, kwaye wokuqala ukwazisa ulawulo Six Sigma phambili. Kusekwe iseti inkqubo yolawulo engqongqo umgangatho, siyakuqhuba silandela zero iimveliso siphene. Thina zibanga ibhabhathane wevalufa, isango vana, iglowubhu vana, hlola wevalufa, ivelufa ibhola, hydraulic vana ulawulo, isivalo ukubhalansa kunye nezinye iimveliso series. Kwakhona ivelisa kwemithambo zokwakha izinto ezahlukeneyo, uxinzelelo, ubungakanani kunye nezinye iimveliso, kukho ezingaphezu kwama-50 series, ngaphezu kwama 1,200 esiXhoseni.
elikumgangatho wenkqubo yokuqinisekisa ngexabiso
Umthamo lwemveliso yonyaka iitoni ezingaphezu kwama-6,000. Products zagutyungelwa zonke iindawo zeli lizwe kwaye zithunyelwa Europe nase-United States kunye namanye amazwe, esisetyenziswa ngokubanzi kwi yonikezelo lwamanzi kunye nokutsalwa, ukwakha, umbane, petrochemical, metallurgical kunye namanye amashishini. ukuhlakanipha Product, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo, ngokuthi umsebenzisi.
Siyazi ukuba sidlule isatifikethi ISO9001 inkqubo esemgangathweni ngamazwe, Like Valve Unezixhobo ebalaseleyo processing umatshini elikhulu neliphakathi-ertyisi 178 iiseti, 32 iiseti kwezixhobo lokuhlolwa kwamanye amazwe. uyilo Product inoveli, isakhiwo phambili, ubugcisa bemveliso libalaseleyo, imveliso ibhityile, ozibonayo ngokupheleleyo. I ulawulo kwenkqubo yoqinisekiso lomgangatho engqongqo kunye nenkqubo yolawulo, siye sifike kumanqanaba aphezulu loyilo, uphuhliso, uveliso kunye uvavanyo nokuhlolwa. umthamo Strong imveliso yenza i "Like vana" kwi xesha lifutshane kangangoko ukubonelela iimveliso, nokubonelela ngenkonzo ngexesha nefanelekileyo emva-yokuthengisa ukuphumeza ulwaneliseko lwabathengi esiphezulu.
Kwixa elizayo izikolo ziza kwakhiwa ukususela namhlanje, Like Valve iya kuba lokuqala-class yenzululwazi kunye nobuchwepheshe ezintsha, inkonzo lokuqala-class, umgangatho toop umoya zezoshishino ukuze bathathe inxaxheba ekudaleni elizayo. Ngumgangatho iimveliso kunye nokwanelisa abathengi nokulolonga ishishini lethu Inkampani lethu, kunye besukela gqolo kunye nophuhliso oluzinzileyo ngaphaya ngokwethu. "Likv iphupha" uya kwenza "iphupha Chinese" kumnandi!
Izinto eziluncedo nezingalunganga ze v ezahlukeneyo ...
Ingxelo: Unxibelelaniso lomatshini omtsha ...
© Copyright - 2018-2020: Onke amalungelo agciniwe.